Xukuumadda Soomaaliya oo guddi u saartay iskaashiga dowladda iyo hayadaha caalamiga ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xukuumadda Soomaaliya oo guddi u saartay iskaashiga dowladda iyo hayadaha caalamiga ah
Muqdisho, April 17, 2014–Golaha Wasiiradda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa, waxaana shir guddoominayey Ra’iisul Wasaare ku xigeenka ahna Wasiirka Diinta iyo Awqaafta, Ridwaan Maxamed Xirsi.
Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha amniga dalka, wada shaqaynta Xukuumadda iyo Hay’adaha caalamiga ah, iyo safarka Ra’isul wasaaraha uu ku tegay magaalada Kismaayo.
“Ciidamada Qaranka iyo kuwo AMISOM ayaa howlgalo is daba joog ah ka waday caasimada Muqdisho si wax looga qabto kooxa u taagan khal khal gelinta amniga caasimada, iyagoona ka soo hooyey guulo waaweyn. Sidoo kale Sagaalkii degmo oo ay ciidamadu ka saareen kooxda nabad diidka ah ayaa noloshu caadi ku soo noqotay lana xoojiyey amnigooda” ayuu yiri Afhayeenka Xukuumadu oo dhanka kalana xusay in maamul u samaynta gobolada ay muhiimad gaar ah siinayso Xukuumadu ayna socoto dood ku saabsan sida ugu haboon oo loo samayn lahaa maamulo ay dadku soo doortaan.
Dhanka kale Gollaha ayaa hoosta ka xariiqay in wada shaqayn joogta ah ay yeeshaan dowladda iyo Hay’adaha Caalamiga si loo xoojiyo wax qabadka laamaha dowladda, dhabahana loogu xaaro sidii loo midayn lahaa arrimaha dib u dhiska dalka iyo gaarsiinta gar-gaarka bani’aadimada, gollaha ayaa magacaabay gudi Wasiiro oo kala ah Wasiiradda Wasaaradaha Arrimaha Dibadda, Qorshaynta, Arrimaha Gudaha, iyo Cadaaladda, si ay u soo diyaariyaan qaabkii ay wada shaqayn u yeelan lahaayeen Hay’adaha Calamiga ah iyo Dowlad Soomaaliya, si siyaasad midaysan loogu dajiyo horumarka dalka.
Ugu danabayntii gollaha ayaa ku baaqay in la tayeeyo ciidanka qaranka si goboha ku haray gacanta nabad diidka looga sifeeyn lahaa loona gaarsiin lahaa dadka adeegyada ay u baahan yihiin, sidoo kale Gollaha ayaa ku tilmaamay booqashada Ra’iisul Wasaaruhu Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed uu ku joogo magaalada Kismaayo mid muhiimad u leh dib u heshiisiinta dadka deegaanka.
Gaas iyo Qeybdiid oo markii ugu horreysay wadahadal ku yeeshay Gaalkacyo